Xafiiska Caafimaadka oo Lagu Dhaliilay Adeeg-Xumo - Xogtashacabka.com
Search...	Home About us Contact us Xafiiska Caafimaadka oo Lagu Dhaliilay Adeeg-Xumo
Published on Saturday, 10 August 2013 17:12	Xogta Shacabka (Jigjiga) Xalay fiidkii waxaa magaalada Jigjiga lagu qabtay kulan loo qabtay maamulada dagmooyinka iyo gobollada laguna qiimaynayey warbixin ay soo diyaariyeen guddiga daba galka Xafiiska Maamulka DDS. Warbixinta guddiga dabagalka ayaa lagu eegayay sida xafiisyada kala duwan ee Maamulka Kililku adeegooda u gaadhsiiyaan dagmooyinka iyo gobollada, taasoo si gaar ah warbixintaasi loogu dhaliilay Xafiiska Caafimaadka iyo Xafiiska Waxbarashada.
Wasiir Ku xigeenka Madaxtooyada Amin Yuusuf oo madax ka ah guddiga daba galka isl mar ahaantaana soo ban-dhigay warbixintan ayaa adeeg xumo badan ku sheegay Xafiiska Caafimaadka oo sida uu warbixinta ku xusay ay jiraan rugo caafimaad oon gabi ahaanba adeeg bixinin, kuwo shaqaalihii ka maqanyihiin iyo qaar u waardiyuhu dawada u qoro dadka bukaanka ah sidii dhaqtarkii.
Madaxweynaha Kililka Cabdi Iley oo shirka fadhiyay ayaa la sheegay in sidi iyadoo warku ku cusubyahay u xanaaqay kadibna telefon kula xidhiidhay Wasiirka Caafimaadka C/fataax Macallin oo isagu shirka ka maqnaa canaan badana dusha uga tuuray.
Sidoo kale ayaa warbixintii xalay fiidkii lagu dhaliilay Xafiiska Waxbarashada oo la soo bandhigay dugsiyo aanay macalimiin joogin, kuwo aan kuraas ardaydu ku fadhiisato lahayn, iyo kuwo an sidii loo dhisay cidiba galin shinbiruhu ku hoydaan.
Labadan xafiis ayaa ah kuwa adeegooda dadku sida aadka ah ugu baahanyihiin waxayna dhaliisha lagu sheegay tilmaan u tahay tayo xumida xafiisyada DDS, maadaama ay xafiisyada kalena ka sii liitaan labadan xafiis.